'मोदीजीलाई कडा सुरक्षाका बीच भव्य र सभ्यरुपमा स्वागत गर्न तयार छौँ ' : मन्त्री यादव - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘मोदीजीलाई कडा सुरक्षाका बीच भव्य र सभ्यरुपमा स्वागत गर्न तयार छौँ ‘ : मन्त्री यादव
Posted by Milap Subedi | २३ बैशाख २०७५, आईतवार १२:१६ |
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण प्रदेश–२ बाट सुरुवात गर्दैछन । प्रधामन्त्री मोदीको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो, उनको यसअघिको भ्रमण काठमाडौंबाट भएका थियो । यसपटक प्रधानमन्त्री मोदी चढेको हेलिकोप्टर सिधै जनकपुरको बाह्र विघामा अवतरण हुनेछ । जनकपुरमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुरमा केही योजना घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारी, भ्रमणलाई सफल बनाउन प्रदेश नं. २ को सरकारले गरिरहेको कामका सन्दर्भमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवसँग राज ढुंगानाले गरेको कुराकानी–
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
– मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही २८ गते जनकपुर आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँ डाइरेक्ट पटनाबाट जनकपुर एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्नुहुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी विश्व समुदायमा क्रेजीका रुपमा उदाउनु भएको छ । जनसुकै देशमा गए पनि उहाँलाई हेर्न सर्वसाधारण एकदमै लालयित हुन्छन् । जनकपुर र अयोध्यायको इतिहासिक सम्बन्ध छ । उनीहरुबीच रगतको नाता छ । सीताको विवाह अयोध्यायमा भएको हुनाले पनि अहिले जनकपुरमा ‘मोदी चलेनन ह्याल’ भनेर कुरा गरिदैछ । मोदीज्यूले जनकपुर आउँदा ठूलो भीड जम्मा हुने सम्भावना देखिएको छ । लगभग एक लाखको भीड जम्मा हुने हाम्रो अनुमान हो । मोदीजीलाई कडा सुरक्षाका बीच भव्य र सभ्यरुपमा स्वागत गर्नका लागि हामी तयारी अवस्थामा बसेका छौं ।
तयारीभित्र के के पर्छन् ?
– भारतीय प्रम मोदीको भ्रमण स्मरणीय र ऐतिहासिक बनाउने तयारी भइरहेको छ । जुनसुकै देशका प्रधानमन्त्री जनकपुर आउँदा भव्य स्वागत सत्कार हुन्छ भन्ने म्यासेज दिन चाहन्छौं । जनकपुरलाई बेहुलीझै सिगाँर्ने हाम्रो योजना छ । भोलिका दिनमा उत्तरतिरका छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री आउनु होला भनेर आशा गछौं । यसले देशलाई फाइदै पुग्छ, कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । हामीले जनपरिचालनलाई महत्व दिएका छौं, सजावटमा पनि हाम्रो ध्यान त्यत्तिकै आकर्षित भएको छ ।
भारतीय प्रमले लगानीका बारेमा पनि केही बोल्नुहुन्छ ?
– मोदी जनकपुर आउँदा हामी भव्य स्वागत गरौं, त्यो हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी हो । लगानीको घोषणा गर्ने कुरा उहाँको भएको हुनाले त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छैन ।
Previousस्थायीत्वका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर जानुपर्छ : दाहाल
Nextप्रदेश नं ३ मा एकसय कानून आवश्यक
संवेदनशील स्थानमा निशेधाज्ञा जारी गरेको गृहमन्त्री थापाद्धारा जानकारी
२० असार २०७५, बुधबार १५:२७
‘एक वर्षभित्र निर्वाचन नभए मुलुक गम्भिर दुर्घटनामा फस्न सक्छ’ : प्रधानमन्त्री
१ फाल्गुन २०७३, आईतवार १७:०१
उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी जन्तीसहित जनकपुरधाम आईपुगे
२६ मंसिर २०७५, बुधबार १२:०९